Dowladda oo arruurineeysa macluumaad ku saabsan halista ay ugu jiraan ineey is dilaan dhalaanka keli socodka ah | Somaliska
Dowladda oo arruurineeysa macluumaad ku saabsan halista ay ugu jiraan ineey is dilaan dhalaanka keli socodka ah
Heydaha kala duwan ee dowladda ayaa sameeynaya baaritaano iyo u kuuragalid la xirriirta sababaha loo aaneeynayo is dilka dhalaanka keli socodka ah ee muddooyinkii ugu dambeeysay la sheegay ineey is dileen dhalaan keli socod ah.
Shabakad madax banaan ee lugu magacaabo Vi står inte ut (Dibadda ma taagnin) ayaa baaq ay dirtay dowladda ku sheegtay walaaca ay ka qabto is dil kale oo ay ku dhaqaaqaan dhalinka keli socodka ah ee sharciayda loo diiday. Shabakadan ayaa sidoo kale xustay in ayadoo kaa shaneeyso ilo wargaleeyo lugu kalsoon yahay iyo baraha bulshadda ay arruuriso macluumaad la xirriira dhalaanka keli socodka, una gudbineeyso dowladda xogahaaasi.
“Iswiidhan waxaa ay qaabishay lambar aad u weyn oo dhalaankaas ka mid ah, waxaana ay haatan hor taagan tahay wado lagala kulmi karo cawaaqib xun” ayaa lugu yiri qoraal ay shabakaddu soo saartay. Kooxdan oo ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshadda sida, kal kaalisooyiin caafimaad, saykoloojisteyaal, shaqsiyaad ka howl gala xarrumaha ceyrta iyo cyemiska iyo kooxaha u dhaq dhaqaaqa soo galootiga .
Lixdii bilood ee ugu dambeeysay ayaa waxaa wararku sheegayaan in lix dhalaan keli socod ah nafta iska qaadeen ka dib markii sharciga dowladu u diiday. Toddobaadkan ayaa waxaa kulmaya mas’uuliyin ka tirsan hey’adaha xafiiska arrimaha bulshadda, wakiilka carruurta kuwaas oo ka doodaya arrimaha dhalaan sococdka ah ee is dilay.
“Waxaa la yaab leh marka la tix raaco tira koobka dhalinyarada la sheego ineey is dilaan inaanu kuwa magangalyo doonka keli socodka ahi aaanu xisaabta iyo soo gudbintoodu ku jirin. Taasi macnaheedu waxaa weeye inaan loo raad raacin sida waajibku farayey” ayuu yiri Fredrik Malmberg, oo ka tirsan hey’adda wakiil carruureedka ee Barnombudsmannen isagoo u warameyey idaacada wararka faafisa ee Ekot. Olivia Wigzell oo ka tirsan hey’adda arrimaha bulshada ayaa dhambaal jawaab celin ah oo ay u dirtay shabakadda Vi står inte ut (Dibadda ma taagnin) ku sheegtay dhambaalkeeda in dowladdu ka warqabto xaaladaha dhalaanka keli socodka ah islamarkaasina sameeyneyo mashruuc suuragal ka dhigayo in la sameeyo tiro koob la xirriira is dilka dhalaanka keli socodka ah.
Mudooyinkii ugu dambeeysay ayaa lix u dhashay dalka Afgaanistaan oo dhalinyaro ahi ayaa nafta iska qaaday ka dib markii dowladda sheegtay in dalkoodii dib ugu celineyso. Arrintan ayaa walaac hor leh ku abuurtay dhalaanka keli socodka ah iyo qeybaha u olloleeya soo galootiga.
Wiil Soomaali ah oo lagu dilay xero qaxooti, yaa ka dambeeya dilkiisa?